विलासी बन्दै यौन व्यापार, को–को हुन् ग्राहक ? – गोर्खा संसार
विलासी बन्दै यौन व्यापार, को–को हुन् ग्राहक ?
गोर्खा संसार२०७५, २ बैशाख आईतवार ०६:२८
 २४ वर्षीया उपमा (नाम परिर्वतन)को कथा केही फरक छ । स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी उपमाले आमाको पाठेघरमा पलाएको ट्युमरको उपचार गराउन एउटा फाइनान्समा रिसेप्सनको जागिर सुरु गरेकी थिइन् । जागिर थालेको एक हप्ता पनि नबित्दै उनी फाइनान्समा नियमित आउने एक ग्राहकसँग नजिकिइन् । ती ग्राहकले उनलाई एकपटकका लागि २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरे । त्यत्रो पैसा पाइने भएपछि उपमा लोभिइन् । ती ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क हुन थालेपछि अन्य त्यस्तै ग्राहकसँग पनि उनको सम्पर्क हुन थाल्यो । मासिक ११ हजार रुपैयाँको रिसेप्सनको जागिरमा लागेकी उपमाले यौन व्यवसायबाट एक दिनमै १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउन थालेपछि उनको मन यतै भुलियो भने एक महिनामै आमाको उपचार खर्च पनि जुट्यो । आमाको उपचारपछि उनी फाइनान्सको जागिर छाडेर यही व्यवसायमा केन्द्रित भएकी छिन् ।
 रमेश (४१ वर्ष) (नाम परिवतन) एक निजी विद्यालयमा गार्ड छन् । बिहान ८ बज्दा नबज्दै रमेश श्रीमती रेश्मा ९नाम परिवर्तन० अनि १० वर्षीया छोरीलाई लिएर एउटै स्कुटरमा हुइँकिन्छन् । श्रीमतीलाई रत्नपार्कमा छोडेर उनी छोरीलाई विद्यालय पुर्‍याउँछन् । बेलुका उनी प्रायस् त्यही रुट हँुदै श्रीमतीलाई लिएर घर फर्कन्छन् । धेरैलाई लाग्ला, रेश्मा रत्नपार्कमा दिनभर के गर्छिन् त रु रत्नपार्क त रेश्माका लागि ‘ग्यादरि·जक्सन’ मात्र हो । त्यहाँ उनी ग्राहकसँग सम्पर्क गर्छिन् र कुनै सुरक्षित स्थानमा गएर त्यस दिनको कमाइको जोहो गर्छिन् । यौनकर्मी महिलाहरूको स्वास्थ्य तथा उनीहरूको मानवअधिकारका सम्बन्धमा वकालत गर्ने एक संस्थामा भेटिएकी रेश्मा यौन व्यवसायमा बाध्यताले लाग्नुपरेको कुरा बताउँछिन् ।
राजधानी काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा यौन व्यवसाय मौलाउँदो अवस्थामा छ । निश्चित उमेर समूह वा निश्चित लिंग, निश्चित वर्ग मात्र यौन व्यवसायमा संलग्न छन् भन्ने छैन । अधिकांश बाध्यताले यो दलदलमा फसेका छन् भने कतिपय रहरैरहरमा यो पेसामा तानिएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३ लाखभन्दा बढी यौनव्यवसायी छन् । तीमध्ये ५४ हजारभन्दा बढी महिला काठमाडौंमा सक्रिय रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय यौन तथा एचआईभी एड्स रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ । केन्द्रले हालै यौन पेसामा संलग्न हुनेहरूको एकीकृत तथा जैविक सर्वेक्षण ९आइबिबीएस० गरेको थियो, जसले अचम्म लाग्दो तथ्यांक पनि निकालेको छ ।
बाध्यताले एकपटक यो पेसामा पुगेपछि यसबाट निस्कन गाह्रो हुन्छ भन्ने उदाहरण हुन्— चितवनकी १९ वर्षीया गौरी ९नाम परिवर्तन० । गाउँकै एक जना दिदीले पढाउने अनि जागिर पनि लगाइदिने भन्दै उनलाई काठमाडौं ल्याइन् । ती दिदीले गौरीलाई एक हप्ता आफूसँगै राखेर बिहानको प्लस टुमा भर्ना गरिदिइन् अनि दिउँसो काम गर्न भन्दै ठमेलको एक पार्लर पुर्‍याइन् । पार्लरमा भर्ना गरिदिएबापत ती दिदीले ३० हजार कमिसन लिइन् भने गौरीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने गरी सम्झौता गरिन् । यद्यपि दुई दिनपछि पार्लरमा काम गर्न नजानेको बहानामा उनलाई आफ्नो शरीर अरूलाई सुम्पनुपर्ने पेशातर्फ धकेलियो ।
गौरीजस्ता अविवाहित युवती मात्र होइन, विवाहित महिलाहरू पनि बाध्यताले यो दलदलमा फसेका छन् । परिवार पाल्न बाध्य भएर यौन व्यवसायमा संलग्न हुनेदेखि छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न यो पेसामा लाग्नेहरूसम्मको कुनै कमी छैन । श्रीमान्लाई घरखर्च उपलब्ध गराएर उनीहरूकै कमाइमा घरबार जोड्नसम्म भ्याएका यौनकर्मी पनि उत्तिकै छन् । केन्द्रले गरेको सर्वेक्षणमा पनि आफ्नै घरव्यवहार भएका यौनकर्मीको संख्या उल्लेख्य देखियो । सर्वेक्षणमा सामेल हुनेहरूमध्ये अधिकांश विवाहित छन्, सर्वेक्षकसमेत रहेका नेसनल इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्चका निर्देशक टेकराज भट्ट भन्छन्—कतिपय श्रीमानसँगै छन् भने कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका श्रीमती हुन् । सर्वेक्षणमा १६ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १८ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र देखिनु भनेको अन्य प्रायस् विवाहित नै हुनु भएको उनको बुझाइ छ ।
अशिक्षित बढी, १४ प्रतिशत
तीन हप्ताअघि प्रमिला ९नाम परिर्वतन०को मोबाइलमा एक अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो । उक्त फोन उनका पूर्व परिचित आइएनजिओका एक जागिरेको रहेछ । प्रमिलालाई पहिलेदेखि नै वाच गरिरहेको बताउँदै उनले एक रातको १५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरे । उनले ती व्यक्तिबाट पाएको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरिन् । यसले के देखाउँछ भने ग्राहकको रोजाइमा परे भने एकै पटकमा राम्रो कमाइ पनि हुन्छ ।
यसरी आउने ग्राहकसँग ४५ दशमलव १ प्रतिशत महिलाले दिनमा एक जनासँग मात्र सम्पर्क गर्छन् । त्यसैगरी ३० दशमलव ७ प्रतिशतले २ जना, १५ दशमलव ६ प्रतिशतले ३ जना तथा ८ दशमलव ६ प्रतिशतले चार वा त्यसभन्दा बढीसँग ९एक दिनमा० यौनसम्पर्क गर्ने कुरा बताएका छन् । उनीहरूमध्ये १३ दशमलव ४ प्रतिशतले प्रत्येक दिन मादक पदार्थ सेवन गर्ने जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै ८ दशमलव ६ प्रतिशतले हप्तामा १ पटक, ३१ दशमलव ६ प्रतिशतले हप्तामा २ देखि ३ पटक, १० दशमलव ८ प्रतिशतले हप्तामा १ पटकभन्दा कम तथा ३६ दशमलव ४ प्रतिशतले कहिल्यै रक्सी सेवन नगर्ने कुरा बताएका छन् ।